Ilhaan Cumar oo ku guuleysatay aqalka Congress - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldIlhaan Cumar oo ku guuleysatay aqalka Congress
November 7, 2018 Puntland Mirror World 0
Minneapolis-(Puntland Mirror) Ilhaan Cumar ayaa mar kale sameysay taariikh cusub. Hadda waxay noqon qofkii ugu horeeyay ee Somali-Mareykan ah oo loo doorto aqalka Congress.
Ilhaan oo ka socota xisbiga Dimuqrraadiga ayaa ka adkaatay Jennifer Zielinski oo katirsan xisbiga Jamhuuriga si ay u matasho degmada shanaad taasoo ka kooban Edina, Richfield, Golden Valley iyo meelo kale.
Ilhaan oo 36-sanno jir ah ayaa taageertay daryeelka caafimaadka uu halka qof isku tiirsanyahay, adkeynta xakameynta hubka iyo siyaasadda balaaran ee soo galootiga.
Waxa ay taariikh ka sameysay gudaha Mareykanka iyada oo qaxooti ahaan dalka kusoo gashay ayay ku guuleysatay xafiis sare oo siyaasadeed. Ilhaan ayaa dalka timid iyada oo 12-sanno jir ah.
Ilhaan ayaa sidoo kale noqotay haweenaydii ugu horeysay oo Muslim ah oo loo doorta aqalka Congress, inkastoo Rashida Tlaib, oo sidoo kale Talaadadii guuleysatay ay noqotay haweenay labaad oo Muslim ah oo loo doorta Congress-ka.
February 17, 2018 Ugu yaraan 19 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay suuq kalluun oo kuyaala Nayjeeriya
November 8, 2018 Dowladda Puntand oo u hambalyeysay Ilhaan Cumar guusheeda aqalka Congress Mareykanka